Rabobank: 'Kuisa Mvura Pamwoyo Webasa Rekuita' - Potatoes News
Nekuisa mvura pamoyo webasa rezvebhizinesi uye nekuwedzera kugutsikana kwemvura, mapurazi anorimika haatarisike nemamiriro ekunze. Kurambidzwa pakushandiswa kwemvura kuri kudzikirawo. Izvi zvinoita kuti varimi vanorimwa vawedzere kutsiga munguva dzine mvura shoma. Izvi zvinotaurwa naRabobank mushumo yaro pamusoro pekutarisirwa kwemvura mukurima.
In yayo chirevo, Rabobank inosiyanisa madingindira mana ayo varimi vanorima vanogona kutanga nawo: kushandisa mari uye kuchengetedza mvura, kuchengetedza mvura inonaya papurazi rako, manejimendi manejimendi uye kubatana kwedunhu. Kuchengetwa kwemvura kunogona kuitwa, pakati pezvimwe zvinhu, nekuwedzera kugona kwekuchengetedza mvura kwevhu, semuenzaniso nekuvandudza mamiriro evhu uye nekuwedzera izvo zvemukati zvemukati. Semuenzaniso, 1 muzana yezvinhu zvakasikwa muvhu zvinobatsira pakuwedzera kuchengetedza mvura pavhu rejecha re6.8 mm uye paivhu revhu 9.3 mm6, bhangi rinotaura mumushumo waro. Dzimwe sarudzo dzinosanganisira kuvaka weir mumatorongo akakomberedza munda, uchishandisa drainage-inodzorwa-nhanho, kana chengetedzo yemvura yepasi pevhu.
Kurima zvirimwa zvisina kuoma zvakanyanya
Munzvimbo yekutarisira njodzi, varimi vanogona kufunga nezve kutora inishuwarenzi yemamiriro ekunze. Pamusoro pezvo, bhanga rinokurudzira kuongorora chirongwa chiripo chekucheka nekugadzirisa zvimwe zvinhu, sekutsiva zvirimwa zvine kusanaya kwemvura kana munyu nezvirimwa zvine simba kana zvirimwa zvine mwaka wakasiyana wekukura.
Kuti uwane mvura yakakwana, kubatana nemapato emaketani mudunhu kwakakosha, rinodaro bhanga. Iko kune zvido zvekubatana, sevatengi vane fariro mune inogara yechigadzirwa mhando uye huwandu, uye mabhodhi emvura nemasangano ezvisikwa anoda kuchengetedza hunhu husina njodzi. Nekushandira pamwe nekudyidzana nemapato emaketani mumunda wekutonga kwemvura, varimi vanorimika vanoona kuti zvido nezvinetso zvebazi zvinzwikwa.
Tiri kuona zvakare kuvandudzwa kutsva muNetherlands: kuyedza nekudiridza kwepasi pevhu kwezvirimwa zvinorimwa. Zvakanakira izvi inyanzvi yekudiridza (75-95%), yakaderera yevashandi mumwaka uye kuwedzera kwekuchengetedzwa kwekuwanikwa kwezvirimwa. Asi iyo sisitimu haina kushomeka pane reel kudiridza uye yakatemwa mitengo yekumisikidza yakakwira. Kune nzvimbo dzine zvirimwa zvakawanda zvekukwirisa (zvakaita sehanyanisi, mbatatisi uye makarotsi) muhurongwa hwezvirimwa panowanikwa mvura shoma, kudiridza kwepasi pevhu inogona kuva nzira yekushandisa mvura nenzira yakanakisa. (Rabobank)
Sarudzo dzekutarisira mvura dzakataurwa mushumo zvinoita kunge masuo akavhurika, asi Rabobank anotenda kuti zvakakosha kuenderera kuunza madingindira aya kuvarimi vanorima. Kuzivisa, anodaro Gea Bakker-Smit, arable chikamu maneja. "Takaona zvikumbiro zvakawanda zvekudyara kwe reel mumakore apfuura. Asi reel haisi kwese kwese mhinduro iri nyore yeramangwana. Chii chaunoita nereel kana paine (zvenguva pfupi) kudiridza kurambidzwa? "Tinoda kutsvaga mhinduro nevarimi, tichifunga nezvekurukurirano yemvura."
Pamusoro pezvo, kurima nekurima ndiko kwakanyanya kukosheswa mune inonzi nhetera yekusiyiwa kwenyika. Izvi zvibvumirano zvakaitwa nehurumende nezvekuti ndiani anowana mvura yakawanda sei panguva yekushomeka kwemvura. “Zvekurima zviri panzvimbo yechina, pekupedzisira. Izvi zvinoreva kuti mamwe mabasa anoiswa pekutanga kana toreva nezvekugoverwa kwemvura iripo. ”
Manejimendi manejimendi chinhu icho varimi vese vanorima vatove kushanda, Bakker-Smit anoziva kubva kune vatengi kutaurirana. “Tinoda kuona pamwe navo izvo zvavakatoita uye kuti izvo zvinokwana here mune ramangwana. "Hatipe mhinduro yakagadzirira, asi tinoda kukurukura nevarimi izvo zvakavakodzera nekambani yavo."
Kusanaya kwemazhizha kwamakore apfuura kwakatungamira kumapurazi anorimika anoisa mari mukudiridza. Funga nezve reels uye / kana kurova matsime. Sekureva kweBusiness Information Network, huwandu hwemapurazi ari kushandisa madiridziro akawedzera kusvika pa45% muna 2019. Huwandu hwemahekita anodiridzira huri kuwedzerawo. Izvi zvinobvumira varimi vanorimika kuti vadzike nguva dzinonaya. Nekudaro, kuisa mari mukudiridza hakuna njodzi. Mune mamwe mamiriro ezvinhu, kudiridza kunogona kurambidzwa nekuti mwero wemvura yepasi unodonha zvakanyanya kana mvura yemudunhu inouya yakamanikidzwa. (Rabobank)
Rabobank: 'Mvura centraal yakadzvanywa mubhedrijfsvoering'
Tags: Mapurazikudiridza hurongwaNetharenziMbatatisi kudiridzakushomeka kwemvura
Kunyangwe aripo emitengo yakaderera, yakawanda mbatatisi yakasimwa muNorth-kumadokero kweEurope